Columbia China Inovhura Chipatara Chechitatu Chitsva uye Chikuru kwazvo muJiaxing
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Columbia China Inovhura Chipatara Chechitatu Chitsva uye Chikuru kwazvo muJiaxing
Columbia China, mubatanidzwa pakati peSeattle's Columbia Pacific Management, Sheares Healthcare Group, 100% ine chikamu chekambani yeSingapore yekudyara Temasek, uye Hong Kong-based conglomerate Swire Pacific Limited, inovhura yayo yechitatu & yakakura 500-mibhedha yakawanda-yakakosha chipatara mu. Jiaxing, Zhejiang Province.
Chipatara cheJiaxing Kaiyi chine rezinesi remibhedha mazana mashanu nenzvimbo yekuvaka inosvika 500 square metres. Yakavakwa zvinoenderana neJoint Commission International (JCI) zviyero uye ine chinangwa chekupa hutano hwakakwana hwevarwere vachishandisa tekinoroji yemazuva ano yekurapa. Iine makamuri gumi ekushanda anosanganisira 112,000 digital OTs, 10 DSAs, 2 LDRP (Labor, Delivery, Recovery uye Postpartum) makamuri, uye michina yekuongorora yepamusoro yakadai seMRI 2. Mari yese yekudyara iUS $6 miriyoni uye chipatara chakatora makore matatu kuvaka nekukomisheni.
Masevhisi anopihwa pachipatara cheJiaxing Kaiyi anosanganisira kubvunza varwere vekunze, mabasa evarwere, tsaona & emergency uye kuongororwa hutano. Hunyanzvi hwayo hunosanganisira mushonga wemukati, oncology, kuvhiyiwa kwese, orthopaedic, kufema, urology, endocrinology, gastroenterology, neurology, nephrology, cardiology, dermatology, gynecology, kuronga mhuri, hemodialysis, vana, kudzoreredza uye yechivanhu Chinese mushonga. Yakashongedzerwa nemichina yekuongororwa yekurapa yemhando yepamusoro yakaita seGE's MRI 3.0, GE's CT 64, digital radiology, Ultrasound, uye rabhoritari yezvekurapa yakazara sevhisi. Varwere vachakwanisa kushandisa yavo yeruzhinji neyekutengesa inishuwarenzi yekurapa kuchipatara.
"Nekuvhurwa kwechipatara chayo chechitatu uye chikuru, Columbia China inotarisira kuendesa huwandu hwepamusoro hwehutano hwehutano, sevhisi uye ruzivo rwemurwere kune 5.5m yehuwandu muJiaxing," akadaro Bee Lan Tan, Mutungamiriri & Boka CEO weColumbia China. "Kuvhurwa kwechipatara kwakabudirira panguva yedenda kungadai kusina kuitika pasina kuzvipira uye kushanda nesimba kwehurumende yeJiaxing uye nerutsigiro rwevakuru vehurumende kuJiaxing Economic and Technological Development Zone. Columbia China inoramba yakazvipira kuunza mamwe matarenda ezvekurapa uye manejimendi epasi rose uye zviwanikwa kuJiaxing, kuitira kuti zvinodiwa nevagari veko zvibatsirwe zvakanaka. "
Seimwe yemapurojekiti akakosha eJiaxing's "100 Years 100 Projects", kuvhurwa zviri pamutemo kwechipatara cheKaiyi kuchabatsira kuvandudzwa kwenzvimbo yehutano hwehutano hweJiaxing uye kugonesa vanhu vari muJiaxing nenzvimbo dzakatenderedza kuti vawane mabasa ehutano asingadhuri uye epasi rese pasina. aifanira kusiya Jiaxing.
Pamabiko ekutanga, Jiaxing Kaiyi Hospital neZhejiang Tongji College dzakasaina Memorandum of Understanding kuti dzishande pamwe chete pakudzidziswa kwevashandi, tsvakiridzo yesainzi uye hunyanzvi hwekuvandudza, uye kuvaka chikuva chekubatanidza kudzidza, kuita nekutsvaga.
Chipatara cheJiaxing Kaiyi neJiaxing Taiwan Investing Entrepreneurs Association chakasainawo chibvumirano chekugadzira nzvimbo yekurapa inosvikirika, isina musono, uye yakagadzika yenzvimbo yekurapa yevaTaiwan vanogara nekushanda muJiaxing.
Sechikamu cheJiaxing Kaiyi Hospital's corporate social responsibility, yakapa 100,000 RMB kuZhejiang Foundation for Disabled Persons kuti itsigire chirongwa chikuru cheinishuwarenzi yekurapa yevanhu vakaremara. Izvi zvichabatsira kuderedza mutoro wekurapa wevarwere vane hosha huru nemhuri dzavo.
Cao Haoqiang, Mutungamiri weJiaxing Kaiyi Hospital, akati "Chipatara cheJiaxing Kaiyi chakwezva kutarisisa kubva kune veruzhinji kubva pakavhurwa zvinyoro nyoro muna Chivabvu 20, 2021. Munguva yekuvhurwa kwakapfava, masisitimu echipatara, zvivakwa, masevhisi uye maitiro akaedzwa uye vashandi vezvokurapa vedhipatimendi rimwe nerimwe vakadzidziswa kupa basa rakanakisisa kuvarwere vedu.”
Kuburikidza nemhinduro dzakagamuchirwa kubva pakuvhurwa kwakapfava, takagadzira “Famous Physicians Center”, tichivavarira kuunza vanachiremba vakanakisa muChina kuti vape rubatsiro rwemhando yepamusoro kuvanhu veJiaxing.
Pamwe chete nekuparura zviri pamutemo, Chipatara cheJiaxing Kaiyi chakaparurawo zviri pamutemo kumisikidzwa kwe "Shanghai Famous Orthopedic Physicians' Jiaxing Kaiyi Center", mukubatana nezvipatara zvakati wandei zvine mukurumbira zvepamusoro uye zvipatara zvemapfupa muShanghai. Chipatara cheJiaxing Kaiyi chine chinangwa chekupa mazano ehunyanzvi kubva kuShanghai vanachiremba "pamusuwo" weJiaxing.
Kudzorera kunharaunda, kubva muna Gumiguru 21-23, Chipatara cheJiaxing Kaiyi chaita “Zuva Rekuchengetwa Kwevakadzi – Intelligent AI Breast Screening for Cancer” kiriniki yerupo, vachishingairira basa rezveutano hwevakadzi. AIBUS, yakangwara yemazamu yekuongorora ultrasound robhoti, pamwe nechikwata chedu chechiremba vachaongorora uye nekuita mabasa edzidzo yehutano munharaunda dzinotevera - Jiaxing Yu Xin Nharaunda, Cao Zhuang Nharaunda, Haiyan Bolite Pepa uye Huixin Import & Export Boka. Chipatara cheJiaxing Kaiyi chichaitawo ongororo yemazamu yegomarara zvakare.